25 Bio nso, Dawid ne mpanyimfo+ a wɔdeda akuw no ano+ no yii Asaf, Heman+ ne Yedutan+ a wɔde asanku+ ne asankuten+ ne nnawuta+ hyɛ nkɔm no asefo no bi sɛ wɔmmɛsom. Na wɔn mu na woyii mmarima ma wɔyɛɛ ɔsom adwuma. 2 Asaf asefo mu, Asaf mma Sakur, Yosef,+ Netania, ne Asarela,+ wɔn nyinaa hyɛ Asaf+ ase; ɔno nso hyɛ nkɔm ɔhene ase. 3 Yedutan+ asefo mu: Yedutan mma Gedalia,+ Seri,+ Yesia,+ Simei, Hasabia ne Matitia,+ wɔyɛ baasia, na wɔhyɛ wɔn papa Yedutan a ɔde sanku hyɛ nkɔm de aseda ne ayeyi ma Yehowa+ no ase. 4 Heman+ asefo mu: Heman mma Bukia,+ Matania,+ Usiel,+ Sebuel,* Yerimot, Hanania,+ Hanani, Eliata,+ Gidalti,+ Romamti-Eser,+ Yosbekasa,+ Maloti,+ Hotir+ ne Mahasiot. 5 Eyinom nyinaa yɛ Heman mma. Ɔno ne ɔdehufo+ a ɔka nokware Nyankopɔn nsɛm kyerɛ ɔhene na ɔma n’abɛn so yi Onyankopɔn ayɛ. Na nokware Nyankopɔn maa Heman mmabarima dunan ne mmabea baasa.+ 6 Ná wɔn nyinaa hyɛ wɔn papa ase wɔ Yehowa fie nnwonto no mu; wɔde nnawuta,+ asanku+ ne asankuten+ too dwom, nokware Nyankopɔn fie som mu. Ná Asaf, Yedutan ne Heman+ hyɛ ɔhene ase. 7 Wɔne wɔn nuanom a wɔakyerɛ wɔn sɛnea wɔnto nnwom mma Yehowa+ a wɔn nyinaa ho akokwaw+ no, wɔyɛ ahanu aduɔwɔtwe awotwe. 8 Enti wɔn nyinaa, akumaa ne ɔpanyin,+ nea ne ho akokwaw+ ne osuani nyinaa, bɔɔ ntonto+ de huu nnwuma a wɔbɛyɛ. 9 Nea ntonto no kosii ni: Asaf na odi kan, na ne de no kɔɔ Yosef+ hɔ, Gedalia+ to so abien (ɔne ne nuanom ne ne mma yɛ dumien); 10 Sakur+ to so abiɛsa, ɔne ne mma ne ne nuanom yɛ dumien; 11 Yisri+ to so anan, ɔne ne mma ne ne nuanom yɛ dumien; 12 Netania+ to so anum, ɔne ne mma ne ne nuanom yɛ dumien; 13 Bukia to so asia, ɔne ne mma ne ne nuanom yɛ dumien; 14 Yesarela+ to so ason, ɔne ne mma ne ne nuanom yɛ dumien; 15 Yesia to so awotwe, ɔne ne mma ne ne nuanom yɛ dumien; 16 Matania to so akron, ɔne ne mma ne ne nuanom yɛ dumien; 17 Simei to so du, ɔne ne mma ne ne nuanom yɛ dumien; 18 Asarel+ to so dubiako, ɔne ne mma ne ne nuanom yɛ dumien; 19 Hasabia to so dumien, ɔne ne mma ne ne nuanom yɛ dumien; 20 Subael+ to so dumiɛnsa, ɔne ne mma ne ne nuanom yɛ dumien; 21 Matitia to so dunan, ɔne ne mma ne ne nuanom yɛ dumien; 22 Yeremot to so dunum, ɔne ne mma ne ne nuanom yɛ dumien; 23 Hanania to so dunsia, ɔne ne mma ne ne nuanom yɛ dumien; 24 Yosbekasa to so dunson, ɔne ne mma ne ne nuanom yɛ dumien; 25 Hanani to so dunwɔtwe, ɔne ne mma ne ne nuanom yɛ dumien; 26 Maloti to so dunkron, ɔne ne mma ne ne nuanom yɛ dumien; 27 Eliata to so aduonu, ɔne ne mma ne ne nuanom yɛ dumien; 28 Hotir to so aduonu biako, ɔne ne mma ne ne nuanom yɛ dumien; 29 Gidalti to so aduonu abien, ɔne ne mma ne ne nuanom yɛ dumien; 30 Mahasiot+ to so aduonu abiɛsa, ɔne ne mma ne ne nuanom yɛ dumien; 31 Romamti-Eser+ to so aduonu anan, ɔne ne mma ne ne nuanom yɛ dumien.
^ Ɔno ara na wɔfrɛ no Subael wɔ nky 20 ne 24:20 no.